mParticle: Unganidza uye Unganidza Dhata reVatengi Kuburikidza nechengetedzeka APIs uye SDKs | Martech Zone
Mutengi achangoburwa watakashanda naye aive neyakaomeswa dhizaini iyo yakabatana pamwe gumi nemaviri kana zvakadaro mapuratifomu uye akatowanda mapinda ekupinda. Mhedzisiro yacho yaive toni yekudzokorora, data remhando nyaya, uye kuoma mukugadzirisa kumwe kuita. Kunyange ivo vaida kuti isu tiwedzere pane zvimwe, isu takakurudzira kuti ivo vaone uye vashandise iyo Mutengi Dhata Platform (CDP) kugadzirisa zvirinani nzvimbo dzekupinda dhata mumasisitimu avo, kuvandudza dhata ravo, kutevedzera zvirevo zvakasiyana, uye kuita kuti kubatanidza mamwe mapuratifomu kuve nyore.
mParticle Mutengi Dhata Dhata
mParticle ine yakasimba, yakachengeteka APIs uye inopfuura 300+ zvigadzirwa zvinogadzira software yekuvandudza (SDKs) kuitira kuti iwe ugone kubata nyore nyore yako mutengi dhata pakati, shandisa masanganiswa nekukurumidza, uye uve nechokwadi chekuti data rako rakachena, nyowani, uye mukuteerera. Nzvimbo yavo inopa:
Dhata dzeKubatanidza - Unganidza dhata ine APIs dzakachengeteka uye ma SDKs uye woibatanidza kune ese maturu echikwata chako uye masystem. Tsvaga data revatengi kwaunoda iwe pasina kunetswa kwechitatu-bato kodhi manejimendi. Kubatanidzwa kune ekushambadzira masisitimu, analytics mapuratifomu, vatengi vatengi mapuratifomu, emari masisitimu ekushambadzira masisitimu, mvumo manejimendi mapuratifomu, uye ekuchengetedza mapuratifomu anowanikwa kuburikidza nepamusoro 300+ SDKs. Iwe unogona kurodha dhata mune hombe dhata yekuchengetera mhinduro kusanganisira Amazon Redshift, Snowflake, Apache Kafka, kana Google BigQuery munguva chaiyo-nguva. Kana, chokwadika, iwe unogona kusanganisa mapuratifomu ako kuburikidza neayo akasimba API.
Data Data - Natsiridza yako data revatengi uye isa data rakanaka kuti rishande nekuronga, kubata, nekusimbisa data revatengi risati ragoverwa neepasi masisitimu.
Utongi hweData - Chengetedza kutevedza mitemo yekuvanzika kwe data uye tsigira hutongi zvinodiwa nesangano rako. Chengetedza kuvanzika kwevatengi vako nehunyanzvi hwenzvimbo, CCPA kutevedzera, GDPR nyaya dzinokumbira, GDPR mvumo manejimendi, PII dziviriro yedata, uye maneja kutevedzera uye kubvumirana nazvo OneTrust.
Data-Inotungamirwa Nyowani - Gadzira zvakasarudzika zviitiko uchishandisa nhoroondo uye chaiyo-nguva mutengi data. Gadzira vateereri, hunhu hwakaverengwa, omnichannel mushandisi profiles, uye shandisa LiveRamp kununura zvakasarudzika mutengi zviitiko.
Batana neye mParticle nyanzvi yekukurukura maitiro ekubatanidza uye orchestrate data revatengi nzira kwayo yebhizinesi rako.
Wona Zvese mParticle Kubatanidzwa Ongorora iyo mParticle Demo
Tags: AdTech kusanganakushambadzira kusanganaAmazon Redshiftanalytics kusanganaApache KafkaAPIkunyorera programming interfacekushandisa michinabig datacdpdata yemutengimutengi data apiMutengi Dhata Platformkusangana kwevatengidata manejimendi manejimendi yekubatanidzadata yekuchengetedza imbakubatanidzwa kwebasa rezvemariGoogle BigQuerymParticleSnowflakesoftware yekuvandudza kit